Ka Qaybgalka Bandhigga Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Horumarinta Gobolka Washington|muujinaysaa Ganacsiga
Bandhigyada Ganacsiga waxay bixiyaan Gobol iyo Ganacsi Fursad ay ku Ballaariyaan Suuqyada Cusub
Gobolka Washington kaliya uma tartamayo 49ka gobol ee kale ee Mareykanka ganacsi cusub iyo maalgashi, laakiin magaalooyinka kale iyo wadamada adduunka. Kaqeybqaadashada aadka loo bartilmaameedsaday, ganacsiga muuqaalka sare leh ayaa muujinaya kuxirankeena qaybaha muhiimka ah waxay noo ogolaaneysaa inaan soo bandhigno faa'iidooyinka badan ee Washington, laga bilaabo shaqaalaheena aadka u xirfada badan iyo tamarta qiimaha jaban ilaa tayada nolosheena cajiibka ah iyo dhaqanka hal abuurka.
Bandhigyadan ganacsi ayaa sidoo kale u oggolaanaya shirkadaha Washington inay si rasmi ah ugu soo bandhigaan taambuuggeenna gobolka, iyagoo u abuuraya hab wax ku ool ah iyaga oo suuqgeeya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda, sameystaan ​​iskaashiyo cusub iyo helitaanka amarro cusub.
Pavilion-ka Gobolka Washington ee 2019 Paris Air Show wuxuu soo bandhigi doonaa tiro rikoor ah oo shirkadaha Washington State iyo wufuud.
Nagala soo qaybgal barnaamijkeena soo socda
Ganacsiyada horey uga mid ahaan jiray taambuugga Gobolka Washington ayaa kuu sheegi doona in soo noqoshada maalgashiga ay tahay mid la qiyaasi karo, gaar ahaan shirkadaha yaryar ee doonaya inay ballaadhiyaan suuqyadooda ama ay soo bandhigaan alaabooyin ama adeegyo cusub.
Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah: bandhig qiimo jaban, shirar iskudhafan oo qiimeyn leh oo leh rajo, fursado isku xirka, dalxiisyo gaar ah iyo martiqaad munaasabadeed, gole weyne si loo maareeyo goobtaada marka aad joogto dhacdooyinka bandhigga iyo qolka shirarka ee heeganka ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir khabiir ku takhasusay Ganacsiga Caalamiga ah Xafiiska Ganacsiga ee Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanka 206-256-6100 si aad ugala hadasho bandhigyada soo socda iyo fursadaha.
Bandhigyada ganacsi ee ay maal-galiso STEP ee soo socda
Si aad u aragto liistada ugu dambeysa ee ganacsiga caalamiga ah waxaad muujineysaa inaad qayb ka noqon karto bandhig ama lamaane, booqo annaga Bog dhacdooyinka.
Waxa ay wada-hawlgalayaasheena dhahaan ...
Waaxda Ganacsiga waxay siisaa adeeg aan caadi aheyn bulshada bilowga tiknoolajiyada shaki kuma jiro in dadaalkooda ay la galeen Mobile World Congress uusan kaliya gacan ka geysan sidii loo kobcin lahaa dakhliga ganacsigeenna, laakiin ay albaabada u fureen ganacsi cusub oo haddii kale aan halkaas joogi lahayn haba yaraatee. Waxaan rajeyneynaa inaan fursad u helno inaan markale kala shaqeyno iskaashiyada mustaqbalka. ”
Red Russak, Horumarinta Ganacsiga ee Apptentive
“Waaxda Ganacsiga waxay qabatay shaqo la yaab leh oo ay ku caawineyso bilowga tiknoolajiyada moobiilka si ay ugu soo bandhigaan xalalkooda dhaqdhaqaaqa sare ee Mobile World Congress. Hawlgalkooda sii socda & agabyada ay noo soo bandhigeen waa mid aad u qiimo badan. ”
Satish Shetty, Aasaasaha & Maamulaha Guud, Codeproof Technologies Inc.
“Bandhigga iyo dhammaan shaqooyinkii ay noo qabteen Ganacsigu way ka weynaadeen wixii aan ka filaynay. Wax ganacsi ah kamaanaan heli lahayn Farnborough ganacsi la'aan. "
Robert Edmondson, Xisaabaadka Shirkadaha iyo Maareeyaha Horumarinta Ganacsiga
Si aad wax badan uga ogaato bandhigyada ganacsiga soo socda iyo sida aad uga qaybqaadan karto, naga soo wac 206-256-6100 ama toos ula hadal khabiir ganacsi Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha & Tartan Aqooneedka ku takhasusay qaybtaada ganacsi.